ခါဘစ် အနှစ်သက်ဆုံး ဖိုက်တာ က ဘယ်သူလဲ ? - SPORTS MYANMAR
ခါဘစ် အနှစ်သက်ဆုံး ဖိုက်တာ က ဘယ်သူလဲ ?
Ultimate Fighting Championship ( UFC ) မှာ ရှုံးပွဲ မရှိသေးတဲ့ နာမည်ကျော် ဖိုက်တာကြီး ခါဘစ် နူမာဂိုမီဒေါ့ က တော့ သူ ဟာ လက်ဝှေ့ လောက ရဲ့ စူပါ စတား တိုင်ဆန်ဖျူရီ လိုမျိုး သက်ဆိုင်ရာ အားကစား နယ်ပယ် ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး ကစား သမားဖြစ် ချင် ပါတယ် လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ခါဘစ် က သူ ဟာ တိုနီ ဖာဂူဆန် နဲ့ ထိုးသတ် နိုင်ဖို့ အတွက် တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစား သွားမှာ ဖြစ်တယ် လို့လည်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ခါဘစ် ဟာ UFC မှာ တစ်ပွဲ မှ မရှုံးနိမ့် ဖူးပဲ ၂၈ ပွဲ မှာ ၂၈ ပွဲ စလုံး ကို အနိုင် ရထားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီ အထဲ မှာ UFC ရဲ့ အကျော် အမော် ကော်နာ မက်ဂရီဂေါ် ကို အနိုင် ယူခဲ့တဲ့ ပွဲလည်း ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ် ။
တိုက်ဆန် ဖျူရီ ကလည်း သူ့ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်ဝှေ့ ကစား သမား ဘဝ မှာ ရှုံးပွဲ လုံးဝ မရှိ သေးဘဲ သရေ တစ်ပွဲသာ ကျခဲ့ဖူး ပါတယ် ။ ဖျူရီ ဟာ သူ သရေ ကျ ခဲ့တဲ့ ဒီယွန်တေ ဝိုင်းဒါး ကို ယခုနှစ် အစ မှာ ထိုးသတ် ခဲ့ပြီး အနိုင်ယူကာ ရွှေခါးပတ် ကို သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ခါဘစ် ဟာ လက်ရှိ မှာ ရုရှ နိုင်ငံ မှာ ရှိနေပြီး ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး အတွက် နေအိမ် မှာ နေထိုင် လေ့ကျင့် လျက် ရှိပါတယ် ။ BT Sport နဲ့ ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျုး မှာတော့ ခါဘစ် က တိုင်ဆန် ဖျူရီ အပေါ် သူ့ရဲ့ လေးစား အားကျမှု ကို ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
“ဂန္ထဝင် တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုရင် စွန့်စား ရဲဖို့ လိုပါမယ် ။ တစ်ယောက် ယောက် နဲ့ ထိုးသတ် တဲ့ ဟာမျိုးပေါ့ ။ ဒါက စွန့်စား ရပါတယ် ။ ကိုယ် ရှုံးချင်ရှုံးမယ် ၊ နိုင်ချင် လည်း နိုင်နိုင် ပါတယ် ။ နိုင်ရင် နောက် တစ်ပွဲ ဆက် ထိုးမယ် ၊ ဒါပါပဲ”
“ဥပမာ ပေးရရင် တော့ တိုင်ဆန် ဖျုရီ ပါပဲ ။ ခင်ဗျားတို့ လည်း သိပြီး ဖြစ်မှာပါ ။ သူ ဘာလို့ အခုလို ကျော်ကြား နေတာလဲ ၊ အားလုံး ကို သူ အနိုင်ယူခဲ့ လို့ ပါ ။ ကလစ်ရှ်ကို လို ဖိုက်တာ မျိုး ကို သူ ယှဉ်ထိုးပြီး နိုင်ခဲ့ တယ် ၊ ဘယ်သူမှ ဒီပွဲ မှာ ဖျူရီ နိုင်မယ် လို့ မထင် ခဲ့ကြ ပါဘူး”
“အဲ့ဒီ နောက် မှာတော့ သူ ဝိုင်းဒါး နဲ့ ထိုးတယ် ၊ သရေ ကျတယ် ၊ မကြေပွဲ ပြန်ထိုး တယ် ၊ လူတွေ က ၅၀-၅၀ လို့ပဲ ထင်ခဲ့ ကြတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ဖျူရီ က အပြတ် အသတ် နိုင်သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါက သူ့ရဲ့ ကြီးမြတ်မှု ပါပဲ ။ ဒါကြောင့်လည်း သူက လက်ဝှေ့ ရဲ့ စူပါ စတား ဖြစ်နေရတာပါ ။ စိန်ခေါ်မှု တွေ ကို အမြဲတမ်း ရှာဖွေ နေတဲ့ သူပါပဲ” လို့ ခါဘစ် က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ခါဘစ် ဟာ လာမယ့် ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့ မှာ တိုနီ ဖာဂူဆန် နဲ့ ထိုးသတ်ဖို့ ပွဲစီစဉ် ထားပေမယ့် ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်း က ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ကြောင့် ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်း ရနိုင်ချေ ရှိတယ် လို့ သုံးသပ် ထားကြ ပါတယ် ။ UFC ဥက္ကဌ ဒါနာဝှိုက် ကတော့ ဒီပွဲ ကို ဖြစ်မြောက်အောင် စီစဉ် ဖို့ ရှိနေပြီး ရုရှ မှာ ပိတ်မိ နေတဲ့ ခါဘစ် အတွက် သီးသန့် ရဟတ်ယာဉ် စီစဉ် ကာ သွားခေါ် ပေးမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။